Mesh alxanka leh, Mesh silig alxan leh, silig bir ah oo aan lahayn - Yuze
Shabakadda Xadhkaha Goynta
Mesh-ka-xidhka-xidhka Bir-la'aanta ah
Mesh-xadhkaga birta ah ee Nederlaand
Birta Aan Lahayn Shanta Heddle Weave Mesh
Shabakadda Weave ee Bir la'aanta ah
Mesh bir ah oo Alxan la'aan ah
Siligga Fiican ee Birta Ah
Silig bir ah oo aan lahayn (Mesh Weaving)
Silig bir ah (Warbaahinta Hose dabacsan)
Silig bir ah oo aan lahayn (xadhig xadhig)
Mesh Alloy Todobale kale
Mesh iyo Mesh bir ah oo silig galvanized ah
Copper, Brass & Bronze Mesh silig
Mesh Product Processing dheeraad ah
Mesh-jeex-jeexa Bir-la'aanta ah
Tuubada Shaashada Birta Aan Lahayn
Alaabooyinka Iibinta KULUL
Siligga birta ah ee birta ah waxay leedahay ductility wanaagsan, xoog cufan oo sarreeya iyo isticmaalka dheer ee isticmaalka, dabacsanaan sare, caabbinta abrasion iyo caabbinta daxalka, dhexroor lebbisan, dusha siman, midab dhalaalaya, ect. Silig bir ah (Mesh Weaving) Halbeegyada: Dhexroorka xadhigga: φ0.10-φ4.00 mm Qalab: 304, 304L, 316, 316L, 201, 202, 301, 302, iwm. Standard: ASTM, GB, DIN,JIS Awooda xajinta: 600N/mm2-800N/mm2 Codsiyada: 70% ee siligga Yuze Stainless Steel hydrogen annealing annealing inta badan waxaa lagu dabaqaa mes
Features: Silig bir ahama waxay leedahay ductility wanaagsan, xoog adkaysi sare iyo daba dheeraada ee isticmaalka, dabacsanaan sare, caabbinta abrasion iyo iska caabin daxalka, dhexroor labis, dusha siman, midabka dhalaalaya, ect. Silig bir ah oo aan bir lahayn Qiyaasta: Dhexroorka fiilada: φ0.10-φ4.00 mm darajada agabka: 304, 304L, 316, 316L,201, 202, 301, 302, iwm. Standard: ASTM, GB, DIN, JIS xoog xoog leh: 600N /mm2-800N/mm2 Xargaha birta ah ee Aaladaha Codsiyada:Yuze Stainless Steel hydrogen annealing silig waxa loo isticmaalaa sidii dabacsanaan...
Mesh silig birta ah ayaa si weyn loogu isticmaalay kiimikaad, kiimikaad batroolka iyo sahaminta saliidda, gaadiidka, warshadaha nukliyeerka, tamarta, dunta, hawada hawada, elektiroonigga, warqadda dawooyinka cuntada iyo qaybaha kale ee warshadaha, meelaha qaarkood ama laga yaabo inay noqdaan walxo bir ah oo lama huraan ah oo la beddelo. Intaa waxaa dheer, mesh-sub-mesh sta-nless birta iyo qurxinta iyo fududahay in la nadiifiyo iyo guryaha antbacterial, in qaybta isticmaalka xagaaga waxaa si weyn loo isticmaalo, sida dhismaha iyo qurxinta, kitc ...
Shabakadda tolmada leh ee isku dhafka ah ee birta aan lahayn waxaa inta badan ka mid ah Mesh Plain/Twill Weave Mesh; waxay u dhaxaysaa 1mesh ilaa 635mesh; "Bolt Tensile" Dharka Daboolka; Mesh-daran iyo Mesh alxan leh. Baaxadda Joogtada ah/Twill Weave Mesh iyo"Twill Bolt" Dharka Bolting ayaa caadi ahaan loogu talagalay codsiyada warshadaha. Dhammaan xakamaynta tayada mesh Square ee ku salaysan ASTM E 2016-15 Heerka iyo alaabta ceeriin ee ku salaysan heerka ASTM A580-14. Waxyaabaha ceeriin Fasalka: 304, 304L, 316, 316L, 430, iwm. Isticmaalka guud ee codsiyada kala duwan: · Cabbirka...
Yuze waxay soo saartaa maro siligga caado u ah si ay u daboosho baahiyaha shaandhaynta macaamiisha. Mesh filter filter Dutch wuxuu bixiyaa awood sifeyn heer sare ah oo loogu talagalay codsiyo badan oo kala duwan, oo ay ku jiraan cadaadiska, shidaalka iyo filtarrada dareeraha ah ee hawada hawada, kiimikooyinka petrochemical, daawooyinka, macdanta iyo warshadaha biyaha wasakhda ah. Birta aan-dhalatada lahayn waxay u adkaysataa kulaylka, aashitada, daxalka iyo xidhashada. Sifooyinkan daraaddood, mesh birta aan lahayn ayaa si weyn loogu isticmaalaa macdanta, kiimikada, cuntada, batroolka, daawada, iwm.,...
Birta Aan Lahayn Shanta Heddle Weave Mesh waxay ku siinaysaa furitaan leydi ah. Naqshadaynta gaarka ah ee meshkan ayaa caawin kara kororka dheecaanka iyo guryaha socodka. Mesh-kani waxa kale oo uu leeyahay meel siman oo dhinac ah, kaas oo si weyn loogu isticmaalo sifaynta warshadaha kiimikada batroolka, qaabka xargaha shaandhada iyo walxaha filter-ka. Astaamaha Mesh Birta Ah ee Shanta Heddle Weave Mesh 1. Waxay soo bandhigtaa furitaan leydi ah 2. Biyo-mareen oo la hagaajiyay iyo astaamaha socodka 3. Waxay bixisaa dusha siman
Mesh-ka-xidhka-xadhkaga ah ee birta ah ee crimped-ka ah waxaa lagu sameeyaa alaabo kala duwan iyada oo loo marayo mashiinka mesh, nooc ka mid ah alaabooyinka siligga caalamiga ah oo leh labajibbaaran ama afargees ah. Mesh-ka-xidhka-xadhkaga ah ee birta-xumeeya waxa kale oo loo yaqaannaa birta crimped birta, shabagyada birta-la'aanta ah, mesh-madaw ee birta crimped iyadoo loo eegayo walxo kala duwan. Yuze inta badan waxay bixisaa Mesh Mesh Bir ah: 302,304,304L,316,316L Astaamaha: Qaab-dhismeed adag iyo qaab raagay
Mesh-xadhkaga birta ah ee alxanka leh waxa soo saara alxanka platoon. Mesh bir ah oo aan bir alxan lahayn ayaa lagu alxanayaa silig bir kaarboon ah oo tayadiisu aad u hooseyso ka dibna balaastig iyo balaastig lagu dahaadhay qabow, dahaadh kulul iyo daahan PVC. Shabakadda siligga birta ah ee alxanka leh waxay ka samaysan tahay silig bir ah oo tayo sare leh. Waa cadaymo aashito ka badan, alkali adkaysi u leh, si adag welded, qurux badan oo si ballaaran loo isticmaalo. Faahfaahinta Mesh Silig Bir Aan Laxaad Lahayn: Birta Aan Lahayn Alxanka Shabakadda Siliga Sifada: co...
YUZE WIRE MESH CO., LTD waa xirfadle silig ahama & saaraha mesh mesh ee Anping, Shiinaha tan iyo 1986. Qiimaha wax soo saarka sannadlaha ah waa in ka badan 40 million USD; 80% badeecooyinka waxaa loo dhoofiyaa 30 waddan iyo gobollo.
Waxaan leenahay 3 warshadood iyo 1 xafiis laan; oo ka kooban in ka badan 200 oo shaqaale: Mid ka mid ah Warshada Xargaha Xargaha Aanay Lahayn; Mid ka mid ah Warshad Sawir-gacmeedka Siliga Bir-la'aanta ah; Mid ka mid ah warshadda Weaving Mesh; Mid ka mid ah xafiisyada laanta ee Shijiazhuang.
Yuze wuxuu gaadhay nidaamka tayada ISO: GB/T19001-2016 / ISO9001: 2015 taas oo ah saldhigga ugu weyn ee hawlaha wax soo iibsiga, habka wax soo saarka iyo ilaalinta tayada.
Yuze wuxuu leeyahay saddex warshadood iyo hal xafiis oo laan ah, oo leh gebi ahaanba in ka badan 200 oo shaqaale ah
Shaqada warshadaha Yuze waxay bilaabatay sanadka 1986 ganacsiga dhoofintana wuxuu bilaabmay ilaa sanadka 2005
Yuze wuxuu sumcad sare ka helay macaamiisha dibadda iyo gudaha, waxaan hubineynaa inaan siino adeeg ka wanaagsan iyo alaabooyin tartan ah shuraakadayada ganacsi.
Mashiinka tufaax cusub onlayn
Recently, set cusub oo ah mishiinka spooling waa komishanka si rasmi ah u geliyey wax soo saarka ee Yuze company.Mashiinku isticmaali karaa PL,PT iyo NP taxane spools nooca, taas oo sii kobcinaysa baakadaha our. Waqtigan xaadirka ah, waxaan ku siin karnaa baakadaha spools sida soo socota: Fadlan nala soo xiriir haddii aad wax baahi ah qabto ama...
Deegaanka Kaydinta ee Mesh Bir-La'aanta ah oo Muhiim ah
Mesh birta ah ee birta ah waa nooc ka mid ah siligga birta ee daxalka u adkaysta, kaas oo aan gebi ahaanba ka xoroobin miridhku, iyo waxqabadkeeda daxalka ee warbaahinta kiimikaad si gaar ah uma deggana. Iska caabbinta daxalka ee mesh birta aan fiicnayn waxaa saameeya walxaha kiimikaad sida nikkel, chromium, cop ...
Ku soo dhawaada dhammaantiin si aad u booqataan Yuze
Markii aan dib u eegay sawirka booqashadii macmiilka, waxaan xusuustay macaamiisha Kuuriya iyo Australiya waxay soo booqdeen dukaanka shaqada oo ay wadahadal dheeraad ah ku sameeyeen qolka shirarka. Waxay ahayd xusuus wanaagsan in dhammaan booqdayaasha iyo qaraabada shirkadda ay ka qaybgaleen doodda waxayna noqon doontaa shaqo aad u fiican in la fahmo...
Waa hab dalacsiin ah oo wanaagsan marka macaamiishu nagu arkaan bandhigyada qaar, gaar ahaan bandhigyada xirfadlayaasha ah, kuwaas oo qaraabada leh alaabooyinka iyo codsiyada alaabta. Waxaan ka qayb qaadanay bandhigyada 4 ee sannadihii 2 ee la soo dhaafay. Waaxdayada iibka ayaa si qoto dheer u fahamtay oo ku saabsan ...
Ciwaanka Warshadda Yuze:
South Zhengrao Road Anping County, Hebei Shiinaha
Ciwaanka Xafiiska Laanta Yuze:
Dhismaha Xafiiska Tower B.Wanda, Magaalada Shijiazhuang, Gobolka Hebei, Shiinaha
mesh bir ah oo aan lahayn, 20mesh ahama birta silig silig shaandhaynta saxan, Shaandhooyinka Mesh Birta Aanay Lahayn, silig, 316 saxan silig bir ah oo aan nadiif ahayn, 316 silig bir ah,